Muraayada, Farshaxanka iyo Farshaxanka Warshada Iibiyaha-SHUNDA - Sanduuq weyn oo alwaax ah oo la dhammeeyey oo leh daboolka hore ee farshaxanka, farshaxanimada, hiwaayadaha iyo Kaydinta Guriga OEM iyo Warshada | SHUNDA
Sanduuq weyn oo alwaax ah oo la dhammeeyey oo leh daboolka xijaabka ah iyo isku xidhka hore ee farshaxanka, farsamada gacanta, hiwaayadaha iyo kaydinta guriga
* Ku soo dhawoow sanduuq kasta oo la habeeyey *
Ku fiican farshaxanno badan, farshaxanno iyo mashruucyo hiwaayad leh. Samee hadiyadda ugu fiican
Sanduuqa alwaaxdu waxa uu leeyahay dabool ku dheggan oo ku habboon in la xardho iyo alwaax lagu gubo
SANDUUQA JEWELRY: Waxaad qurxin kartaa sanduuqan dahabka ah ee aan dhammayn si kasta oo aad rabto
alwaax AAN DHAMAYN: Waxa laga sameeyaa alwaax ka samaysan alwaax ka dhiga mid waara
ISTICMAALA BADAN: Sii hooyada, saaxiibada, ama xaaska hadiyad qurux badan si ay ugu ilaashadaan maraqa, dahabka, iyo qurxinta
100% Qoryaha Dabiiciga ah
Adag, adkaysi leh, deegaan-saaxiibtinimo oo aan lahayn ur xun. Midab dabiici ah oo khafiif ah oo leh dhamaadka ugu fudud, oo ku habboon mashaariicda hiwaayadda DIY ee dhammaan noocyada kala duwan.
Fikrad Hadiyad Gaar ah
U isticmaal sanduuqan kaydinta hadiyado gacmeed oo gaar ah qofkaga aad jeceshahay. Ku dar sawiro, xusuusta aan la ilaawi karin, ugu badnaan "qiimaha lahaa" daqiiqadaha aad wada qaadateen. Abuuritaanka khibrad cusub oo xusuus leh kuwa aad daryeesho.
Qalab alwaax alwaax ah
Midabka Midabka la habeeyey
Mudada lacag bixinta TT, paypal, veem, Escrow, midowga galbeed, lacag caddaan ah, iwm
Qoryaha Dabiiciga ah
Adag, adkaysi leh, deegaan-saaxiibtinimo oo aan lahayn ur xun.
Ku dar maroojin boho qol kasta
Qalfoofkan derbiga ah ee gacanta lagu sameeyay, kaas oo lagu tuuray qaab dayaxeed oo gaar ah, taasoo ka dhigaysa bayaan ku habboon qol kasta. Ku dar qurxinta dayaxa ee qolkaaga fadhiga, xanaanada, jikada, qolka jiifka.
Qurxinta bohemian alwaax ah oo qaali ah
Ka samaysan alwaax, khaanadaha derbigayagu waa kuwo raagaya oo si fudud loo nadiifin karo. Maalgeli shelf warshad gidaar xoog leh, shelf crystal, shelf buugaagta gidaarka, shelf saliidda muhiimka ah, ama shelf knick knack.
Ku laad shelf kaaga sabbaynaysa neecaw
Qalfoofka qurxinta gidaarkayagu wuxuu diyaar u yahay inuu soo laadlaadsado, taasoo kuu badbaadinaysa wakhti aad ku qaadato kulanka daalka badan. Isticmaal furayaasha si aad ugu rakibto qol kasta oo gurigaaga ah oo aad iftiimiso qurxinta gidaarka boho.
Ka yaab qoyskaaga iyo asxaabtaada:
Qalfoofkan alwaax ku xardhan oo ku jira naqshadda dayax-bixeedka ee dhiirrigelinta leh waxay ka dhigtaa guri diirimaad gaar ah, kirismaska, Maalinta Hooyada, ama hadyada dhalashada. Kuwa aad jeceshahay waxay noqon doonaan in ka badan dayaxa!
1. OEM & ODM, Farsamo kasta oo alwaax ah ayaa lagu habeyn karaa qaabka, midabka, cabbirka, iwm.
Warshada Qurxinta Guriga ee Shunda waa shirkad bixisa farsamada gacanta oo alwaax ah oo bixisa wax soo saarka, nashqadaynta, iibka iyo adeega iibka kadib macaamiisha caalamka. Shirkadeena waxay diirada saartaa soo saarista iyo naqshadaynta dhamaan noocyada kala duwan ee alaabta farsamada alwaax sida shelf alwaax, shelf moon, shelf star, sanduuq alwaax ah, sanduuqa hadyada, hadyada alwaax iwm.
Alaabooyinka tayada sare leh, tartanka qiimaha leh iyo adeegga ugu fiican ayaa ah raadintayada aan joogsiga lahayn. Gaadhi waayo-aragnimo xagga wax-soo-saarka alwaaxyada ah iyo dhoofinta waxay aaminsan tahay inay ku siin karto khibrad iskaashi oo wanaagsan. Hababka cusub & qaababka kala duwan iyo adeegga fekerka leh, alaabadayadu waxay ku guulaysteen kalsoonida iyo kalsoonida macaamiisheena, Fiiri fariintaada oo ku soo dhawow warshadeena.
Hore: 5pcs wejiga dayaxa wuxuu dejiyaa shelf alwaax wareegga dayaxa derbiga shelf qolka fadhiga qolka jiifka balbalada xaflad dayax madoobaad shelf qurxinta gidaarka
Xiga: Hermes isla Saint Louis crystal nal aan xadhig lahayn oo sariirta dhinaceeda ku dheggan nalka nalka wiish kiish smart charger habeen nalka nalka
Sanduuqa alwaaxa ee qolka
Sanduuqa alwaaxa ee deegaanka saaxiibka ah
Sanduuqa alwaaxa ah ee Hinged
Sanduuqa alwaax leydi ah
Sanduuqa Alwaaxa ee Square
Sanduuqa Qoryaha aan dhammayn
Sanduuqa Qoryaha leh Latch
Sanduuq alwaax ah oo Quful leh
Sanduuqa Qoryaha leh ee Muraayada
Sanduuqa alwaaxa leh ee daboolka lagu silbanayo
Sanduuqa Farsamada alwaaxa
Sanduuqa Farsamada alwaax ee Daboolka
Sanduuqa Hadiyada alwaaxda
Sanduuqa Hadiyada alwaax ee Daboolka leh
Sanduuqa Xiritaanka Hadyad Alwaax ah
Sanduuqa alwaaxyada leh
Sanduuqa Qurxinta Qoryaha
Sanduuqa Kaydinta alwaax
Sanduuqa Nudaha alwaaxda
Sanduuqa hadiyadaha alwaax afar gees leh oo afar gees leh oo leh...
Sanduuqa saliidda baakad hadiyado alwaax afar gees ah oo afar gees ah ...
Alwaax geed-saleed ah oo jumlo ah oo ku wareegsan sanduuqa veneer alwaax che...